अध्यक्ष केसीको उपचारका लागि सहयोग गरौं - NepaliEkta
अध्यक्ष केसीको उपचारका लागि सहयोग गरौं
11 November 2020 13 June 2021 Nepaliekta	0 Comments
1897 जनाले पढ्नु भयो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई उपचारका लागि सहयोग गर्न पार्टीले सबैसँग अपिल गरेको छ । केही दिनदेखि स्वास्थ्य अवस्था विग्रेर उपचाररत अध्यक्ष केसीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उहाँ निमोनिया रोगबाटसमेत ग्रस्त हुनुभएको छ ।
राजमोका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अध्यक्ष केसीको सहयोगका लागि अपिल गर्नुभएको हो ।
उहाँको उपचारमा लाग्ने खर्च पार्टी तथा शुभचिन्तकहरुको सहयोगबाट गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट पार्दै राजमोले पार्टीको बैंक खाता नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसी केही दिनदेखि निमोनिया रोगबाट ग्रस्त हुनुभएको छ । उहाँको स्वाव परीक्षण गर्दा हिजो कोरोना पोजेटिभ पनि देखिएको छ । उहाँलाई पहिलेदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु थिए । अहिले उहाँको मेडिसिटी अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ । स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर छ ।
आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले का। चित्रबहादुर केसीको लामो समयसम्म अस्पतालमा राखी उपचार गर्नुपर्ने भएकोले उहाँको उपचारमा लाग्ने खर्च पार्टी तथा शुभचिन्तकहरुको सहयोगबाट गर्ने निर्णय भएको छ । सहयोगदाताहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैंक खातामा सहयोग रकम जम्मा गरिदिन अनुरोध छ ।
वचत खाता नं. १४२०००४१७३०१
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नयाँ बानेश्वर शाखा ।’
← खोजी गरौं
दाङकाे बंगलाचुलीमा राष्ट्रिय जनमाेर्चाकाे समिती गठन →